Oghere Oyi nke October 2020 - latabernasanlucar.com
Mkpịsị aka gị na-atụ ogho dị njikere maka mbipụta ndị ọhụrụ na-akpali akpali, ndị nwere ike ịme gị obi ụtọ ruo ọtụtụ awa? Ihe okike a na-ewere na ntu-ndị na-agba mbọ na-egwu egwuregwu dị na igwe oghere ndị a kpọtụrụ aha na nso nso a wepụtara ma ndị egwuregwu nabatara ya nke ọma.
Onyinye a na-enye adịghị ada mbà, yabụ na-agụ ihe!
Nkọwapụta Madam site na Play’N Go
Zute ihe omimi Madam Ink na otu n’ime salons tattoo kachasị mma ị nwere ike ịchọta n’elu igwe. Nwanyị a nwere akọ maka ime ka ndị egwuregwu nwee obi ụtọ dị ka ihe nrite ọ ga-enye nwere ike iru 5,000x the Wager!
Mepụtara ndị ọkachamara Play’N Go, nke a 5 reel na 243 merie ụzọ igbu egbugbu egwuregwu abụghị ihe dị mkpirikpi eserese cinematic, yana mgbakwunye na menu adịghịkwa njọ. Ga-ebikwasị aka gị na akara mpempe akwụkwọ ink na-enweghị usoro ọ bụla na-agbanwe. Ihe na-atọ ụtọ nke ukwuu mgbe akara ngosi 3 × 3 Madame Ink na-acha 3. Nke a bụ mgbe ọ tụgharịrị na akara akara akara egbugbu dị elu ebe akara ngosi ihe omimi dị na-agbanwekwa na akara ngosi egosiri na etiti. E wezụga ndị a egwu isi egwuregwu atụmatụ, na Madam Ink oghere na-eme ọgaranya site 3 na-akpali akpali free spins egwuregwu. N’ebe a na-akwụghị ụgwọ, ị nwere ike ịhọrọ igwu egwu na anụ ọhịa ma ọ bụ atụmatụ Mystery nke Madame, ma ọ bụ ọbụlagodi ha abụọ ma ọ bụrụ na ị dị njikere ịchụ ọnụ ọgụgụ ntụgharị. Na nchịkọta, Madame Ink bụ egwuregwu kachasị mma yana 96.21% RTP na usoro ọdịiche.
Eze nke Gold oghere site iSoftBet
Ọzara ọdịda anyanwụ ịnwụ maka na-egosipụta na igwe oghere nke Ndị Eze nke Gold site na iSoftBet. Ọ dịkwa oke mma ịmara na ihe a na-eme na edo edo edo edo edo anya nke ọma pyramid na-ekwe nkwa ụgwọ ọrụ bara uru.
Ihe mmeri ndị eze nke ọla edo sitere na paylines 25, yana ole na ole dị mfe ma na-akụda. Iji mee ka o doo anya, a pụrụ ijide ịkwụ ụgwọ ihe ruru 1,121x iji gbanwere akara mkpụrụ ego ọla edo na Fero Gold Respins. Na-amalite nyocha gị maka ọla edo site na enyemaka nke 3 3 mgbe ọnụ ọgụgụ nke ndị ahụ na-ebido mgbe ọ bụla akara akara mkpụrụ ego ọhụrụ. Nke ka mma, Fero Gold Respins na-abịa na ntụgharị nke akara ngosi ọlaedo ọlaedo nke na-anakọta mkpụrụ ego ahụ na-enweta mmeri ma wepu akara niile maka ohere ọhụrụ iji nweta ego ọzọ. Na-agbakwunye obi ụtọ na egwuregwu ahụ bụ free spins na synced reels. Na mkpokọta, ndị eze ọla edo nwere ọtụtụ ihe dị jụụ na-enye, na-eme ka ọ bụrụ ihe atọ ụtọ Egypt-tọhapụrụ atọ ụtọ!
Oghere Golden Tsar site na Red Tiger
Nweta mkpịsị ọhụụ nke ọla edo edo edo mara mma nke egwuregwu egwuregwu chandeliers n’akụkụ ụgwọ ọrụ na-enwu enwu kwesiri ndị Russia Tsar n’onwe ya. Ahụmịhe a dị na igwe 5 adọrọ mma na igwe nkwụnye ụgwọ nke 30 payline Golden Tsar site na Red Tiger.
Ngwakọta nke okomoko, ịba ụba, na ụgwọ ọrụ nke ihe ruru 1,936x nke gị na-akwụ ụgwọ nwere ike ịrata ndị egwuregwu n’ime bọlbụ Red Tiger ebe nzukọ a na ndị ezinụlọ 4 Royal chọrọ. Nke a bụ n’ihi na ụyọkọ eze kachasị mmesapụ aka na egwuregwu ahụ, ọkachasị mgbe mita jupụtara na ndị eze na-agbasawanye iji wepụta ego nkwụnye ego. Ọbụna nke ka mma bụ na na free spins (12 na mbụ), enwere ezigbo ohere ịtụgharị akara ngosi niile na-akwụ ụgwọ ka ịgbasa akara ngosi. Cherị dị na achicha ahụ bụ egwuregwu 15 na-enweghị egwuregwu ọzọ enwere ike itinye n’akpa n’oge atụmatụ ahụ. Na mkpokọta, Golden Tsar na-enye ọmarịcha anya, nnukwu mmeri, ma dị mfe ma na-atọ ụtọ igwu egwu. Oghere nwere obere ebere ma a bịa n’ihe dị iche, yabụ anyị adọla gị aka na ntị!
Dị njikere ịnwale otu n’ime oghere ndị a dị jụụ? Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịtụ egwu egwuregwu ndị a n’efu, ozi ọma bụ na onye ọ bụla n’ime ha dị na ọnọdụ ngosi na weebụsaịtị weebụsaịtị WildTornado. A na-anabatakwa ezigbo ego nzo na cha cha anyị nyere ikikere. Nnọọ!